News - Nalalka tamarta qoraxda
1. Haddaba intee in le’eg ayay nalalka qoraxda ku shaqeeya?
Guud ahaan marka laga hadlayo, baytariyada ku shaqeeya nalalka cadceedda ee bannaanka waxaa laga filan karaa inay socdaan illaa 3-4 sano ka hor intaanay u baahnayn in la beddelo Laydhka laftiisa ayaa socon kara toban sano ama ka badan.
Waxaad ogaan doontaa inay tahay waqtigii wax laga beddeli lahaa markii laydhadhku awoodi waayaan inay sii wataan kharashka si ay u iftiimiyaan aagga inta lagu jiro habeenkii.
Waxaa jira dhowr arrimood oo la isku habeyn karo oo sidoo kale saameyn ku yeelan kara nolosha nalalkaaga qorraxda ee banaanka.
Midkood, meelayntooda la xidhiidha nalalka kale ee macmalka ah ayaa yarayn kara ama xoojin kara cimrigooda. Hubso in nalalkaaga cadceedda banaanka la dhigo qorraxda tooska ah meel ka fog laydhka waddada ama iftiinka guriga, maaddaama ku dhowaanshaha u dhowaanshaha ay tuuri karto dareemayaasha sababa inay ku bilaabaan iftiinka hooseeya.
Marka laga reebo halka ay ku yaalliin, nadaafadda baalayaasha qorraxda ayaa sidoo kale qayb ka noqon kara ilaalinta nalalka qoraxda. Gaar ahaan haddii nalkaagu ku yaallo meel u dhow beer ama meel kale oo caadi ah oo wasakh ah, hubi inaad tirtirto baararka toddobaad kasta oo kale si ay u helaan qorrax ku filan.
In kasta oo inta badan nidaamyada laydhku loogu talagalay inay iska caabiyaan noocyada kala duwan ee cimilada iyo cimilada, waxay si fiican u shaqeeyaan markay heli karaan maalin buuxda oo qorraxdu toos u tahay oo aan khatar ugu jirin in lagu daboolo baraf ama ay ku dhacdo dabaylo daran. Haddii aad ka walaacsan tahay cimilada xilliyada gaarka ah ee sanadka ee saameynaya nalalka ku shaqeeya ileyska cadceedda, tixgeli inaad u keydiso xilliyadan.
2. Mudo intee le'eg ayay nalalka qoraxda ku shaqeeya ay shidan yihiin?
Haddii nalalka qorraxdaada dibedda ka hela iftiinka qorraxda ee ku filan oo buuxa (badanaa qiyaastii siddeed saacadood), waxay awoodi doonaan inay iftiimiyaan fiidkii oo dhan, laga bilaabo markay iftiinku hoos u dhacaan, qorrax dhaca.
Mararka qaarkood laydhku way sii dheereyn doonaan ama ka gaaban yihiin, dhibaatadaas oo badanaa loo aanayn karo sida ugu wanaagsan ee ay quluubtu u awoodaan inay nuurka u qaataan. Mar labaad, hubinta si loo hubiyo in nalalkaagu ku yaalliin meesha ugu habboon (qorraxda tooska ah, oo ka fog hooska ama dhirku dedan yahay) ayaa kaa caawin kara hubinta inay si fiican u shaqeynayaan.
Haddii aad ka walwalsan tahay in baytariyada nalalkaaga si xad-dhaaf ah loo isticmaalay, tixgeli inaad waqti u dejiso laydhadhka ama aad damiso iyo / ama aad meel dhigato in muddo ah. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sidoo kale tijaabiso dhowr goobood oo kala duwan ka hor intaadan go'aansan meel joogto ah oo nalalkaaga ah.
3. Tilmaamaha cilad-bixinta ee nolosha iftiinka qoraxda
Waxaa laga yaabaa inaad ku aragto inta lagu jiro noloshaada iftiinka, inaad la kulanto dhibaatooyin qaar ka mid ah shaqadooda.
Dhibaatooyinka caadiga ah waxaa ka mid ah batteriga oo dhimanaya, iftiin daciif ah oo nuugista qorraxda oo liidata, ama cilladda guud ee iftiinka. Arrimahani waxay u badan tahay in loo aanayn karo da'da iftiinka qoraxdaada ama nadaafada qoraxda laftooda.